बुद्ध-जयन्तीको सन्दर्भमा बुद्धको बचन "जीवनको चार आर्यसत्य" | मझेरी डट कम
Biju Subedi — Thu, 05/03/2012 - 08:51
मानव कल्याणका लागि महामानव भगवान बुद्धको उपदेश जीवनको चार आर्यसत्य
भगवान बुद्धले संसारलाई जीवनको चार आर्यसत्य दिनुभएको छ । भगवान बुद्धको यो उपदेश सर्वकालका लागि उपयोगी सिद्ध भएको छ । यो मार्ग शुरु भएको ढाई हजार वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर उहाँले बताउनुभएको मार्ग त्यो समय पनि सटीक थियो , आज पनि छ र जबसम्म मानव रहन्छ तबसम्म रहनेछ । उहाँले मानवको स्वभाव र चेतनाको कुरा गर्नुभएको छ । श्रद्धामा होइन विज्ञानमा आधारित भएर । उहाँले एउटा जीवन–विज्ञान दिनुभयो । दर्शनशास्त्रको मात्र कुरा होइन रोग र मनोचिकित्साको कुरा गर्नुभयो । कसैमा आश्रित हुने कुरा होइन बरु स्वयम्मानै जागरण र होशमा महत्व दिनुभयो । इशारा गर्नुभयो र मार्ग स्वयम्ले खोज्नुभयो । उहाँको पूरै जोड यसमा थियो कि मनुष्यको पीडा कसरी हटोस् , त्यसको कसरी रुपान्तरण निकाल्ने ? र ऊ स्वयम्ले आनन्दरुपी स्वभावलाई चित्र सकोस् ।
त्यसैका लागि भगवान बुद्धले चार आर्यसत्यको घोषणा गर्नुभयो ।
१) दुःख छ , मानिस दुःखी छ ।
२) मानिसको दुःख उसको दुःखी हुनाको कारण हो । दुःख अकारण त हुँदैन ।
३) दुःखको निदान छ , दुःखको कारणलाई हटाउन सकिन्छ । दुःख हटाउने साधनहरु छन् । त्यो नै आनन्द पाउने साधन हो ।
४) दुःख निवारणको अवस्था छ । एउटा यस्तो अवस्था छ जब दुःख रहन सक्दैन । दुःखबाट मुक्त हुने पूरै सम्भावना छ ।
जीवनमा दुःख छ ।
भगवान बुद्धले भत्रुभयो जीवनमा दुःख छ । जीवननै दुःख हो त्यसकारण कि मानिसहरु दुःखमा परे र उसले दुःख देख्न सकेन । बुद्ध भत्रुहुन्छ जन्म दुःख हो । जवानी दुःख हो । मित्रता दुःख हो । प्रेम दुःख हो । रोग दुःख हो । सम्बन्ध दुःख हो । असफलता त दुःख हो तर सफलता पनि दुःख हो । लाग्दछ कि बुद्ध महादुःखवादी हो । यसरी पनि भत्र सकिन्छ जीवन आनन्द हो । आनन्दको उपाय छ । आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ । आनन्दको एउटा स्थिति छ । यो पूर्णताको स्थिति हो । यो दुःख निवारणको स्थिति हो । तर प्रश्न उठ्दछ बुद्धले नकारात्मक मात्रै किन सोच्नुभयो ? कारण सफा छ । दुःखको बारेमा त सबैलाई थाहा छ । आनन्द कसलाई थाहा छ र ! जसलाई साक्षात्कारनै गरेको छैन , जसलाई जानेकै छैन , कुनै परिचय नभएको कुरालाई उठाउन कसरी सम्भव छ र ! शुरुवात त अनुभवको आधार बनाएर गर्न सकिन्छ । जीवन दुःख हो , यो त जीवनको तथ्य हो । यसलाई कसले इन्कार गर्न सक्छ र ! दुःखबाट जो पनि मुक्त हुन चाहन्छ । बुद्धले जीवनलाई निन्दा गर्नुभएको छैन । यत्तिनै भत्रुभएको छ जीवनको ढङ्ग छ , त्यो दुःख हो । जीवनमा सबै दुःखको रोगले ग्रस्त छन् । उहाँले रोगलाई चिनाइदिनुभयो । फेरि उहाँ रोगको कारण बुझाउनुहुन्छ । रोगबाट छुटकारा दिलाउनलाई औषधि पनि बताउनुहुन्छ र रोगबाट मुक्त भएकाहरुको स्थितिका बारेमा पनि बताउनुहुन्छ । उहाँले यीसब करुणाका कारण भनिरहनुभएको छ । जीवन दुःखको घर बनिरहेको छ , आफ्नो जीवन पद्धतिका कारण । उहाँले त जीवनको यथार्थ कुरा भनिरहनुभएको छ ता कि त्यस काँडाले विझोस् फेरि त्यसलाई टाढा भगाउने उपाय गरोस् र जसबाट महासुख प्राप्त होस् , आनन्द प्राप्त होस् ।
दुःखको कारण छ
भगवान बुद्ध आनन्दको कुरा गर्नुहुत्र । उहाँ त भत्रुहुन्छ कि दुःख उत्पत्र गर्ने कुराहरुलाई छोडिदेऊ । आनन्द त आफसेआफ हुन्छ । किनकी आनन्द त मानिसको स्वभाव हो । आनन्द त छ त्यसलाई लिने थोरै हो । दुःख भएन भने त स्वतः आनन्द हुन्छ । मानिसहरु सोच्दछन् कि जब आनन्दनै छ भने त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोशिश गर्नु पर्दछ । तर दुःख नहटाई आनन्द प्राप्त गर्न सकित्र । आनन्दको खोजमा ऊ दुःख भुल्दछ । दुःखको बाटोमा जान थाल्दछ र आनन्दको कामना गर्न थाल्दछ । रोगको कारण भइरह्यो भने त स्वास्थ्यको कामनाको कुनै परिणाम हुत्र । अतः बुद्ध भत्रुहुन्छ कि स्वास्थ्य पाउने हो भने त बिरामीको कारण पत्ता लगाऊ र त्यसलाई हटाऊ अनिमात्रै स्वस्थ्य रहन सकिन्छ । बुद्धको उपदेशको सबैभन्दा ठूलो कुरो यो हो कि उहाँले कुनै सिधा कारण बताउनु भएन । इशारा गर्नुभयो र महत्वपूर्ण कुरा भत्रुभयो — “अप्प दीपोभाव ” । आफ्नो दीयो स्वयम् बन । उहाँले भत्रुभयो — “ आकाशे च पदं नत्थि, समणो नत्थि बाहरे ” । आकाशमा पथ हुँदैन र जो बाहिरतिर दौडन्छ उसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले त बुद्धको मार्गमा ध्यानमा विशेष जोड दिइएको छ र होशतिर सबैभन्दा बढी ध्यान दिइन्छ । ध्यानमा जति निर्विचारको स्थिति आउँछ त्यतिनै आनन्द स्पष्ट हुन थाल्नेछ । विस्तारै–विस्तारै यो स्पष्ट हुनेछ कि सुख , आनन्द , संसारमा खोजेर प्राप्त गर्न सकित्र । ध्यानबाट घण्टा–आधाघण्टामा प्रकाशको सानो–सानो किरणले जीवनदृष्टिमा आरम्भ गरिदिनेछ । दुःखको कारणमा दृष्टि प¥यो त उपचार प्रारम्भ भयो ।
भगवान बुद्धले भत्रुभएको छ यदि कोही दोषयुक्त मनबाट बोल्दछ अथवा कर्म गर्दछ भने दुःखले उसको अनुसरण यसरीनै गर्नेछ कि जस्तो गाडालाई तात्रे बैलको खुट्टाको । यदि मनमा कसैलाई दुःख दिने भाव उठ्दछ भने त बीज झरिरहेको छ । बीज ठूलो भएर बृक्ष बत्रेछ र त्यसमा फल लागेपछि त उसले भोग्नुनै पर्नेछ । प्रायः जब दुःख आउँदछ त मानिसहरु सोच्दछन् कि कोही अरु उसको लागि दुःख उत्पत्र गरिरहेका छन् — पत्नी , पति , छोरा , पिता , मित्र , समाज आदि । तर बुद्ध भत्रुहुन्छ कि दुःखको कारण व्यक्तिको मनमा हुन्छ । बाहिर खोज्न गयौं भने गल्ती हुन्छ । उहाँ भत्रुहुन्छ यदि कसैले गाली गर्दछ भने त्यसलाई स्वीकार नगर । दोष उसको हो क्रोध ग¥यौं भने हामीले आफैलाई दण्ड दिन्छौं । जब हामी कुनै चिजलाई भित्र लिन्छौं तबनै त्यो सक्रिय हुन्छ । अरुबाट नलेऊ , भित्र जानै नदेऊ त दुःखको कुनै कारण हुनेछैन । सबै कुरा मनको हो । त्यसको व्याख्या गरिएको छ । सबै त्यसैमा निर्भर हुन्छ ।
त्यसकारण बुद्ध भत्रुहुन्छ जति हामी द्वेषीको या बैर बैरीको गर्दछौं त्यसभन्दा धेरै खराबी गलत मार्गमा लागेको चित्तले गर्दछ । उहाँ भत्रुहुन्छ दुश्मनसँग डराउने जरुरत छैन , चित्तसँग डराउनु आवश्यक छ किनकी गलत दिशामा गएको चित्तनै हानी गर्दछ । ठीक दीशामा जाने चित्त त मित्र हुन्छ । अतः चित्तबाट साबधान हुनु आवश्यक छ । गलत मार्गमा लैजाने चित्त व्यक्तिला्रई सबैतिर भट्काउँदछ । स्वयम्लाई भित्रि खोजको साधन बत्र दिँदैन , त्यसले स्वयम्लाई एक्लो बत्र दिँदैन । चित्त यदि भीडबाट हट्यो भने , स्वयम्मा केन्द्रित भइदियो भने त दुःखको कारणनै समाप्त भइजान्छ ।
सुख–दुःख ब्याख्यामा निर्भर
सुख र दुःख हेर्नमा निर्भरनै दृष्टिमा निर्भर हो । यो सबै आ–आफ्नो व्याख्या हो । त्यही कुरा कसैलाई सुख हुन सक्दछ त कसैलाई दुःख हुन सक्दछ । त्यही कुरामा कोही निरपेक्ष रहन सक्दछ , न दुःख अनुभव गरोस् न सुख । यो पनि हुन सक्दछ कि जुन आज सुख लागिरहेको छ भोलि त्यही दुःख हुनेछ । त्यसको बिपरीत पनि हुन सक्दछ । यदि जीवनको ठीक–ठीक निरीक्षण भयो भने निश्चयनै ज्ञात भइजान्छ कि जीवनमा हामी जे पनि अनुभव गर्छौ , दुःख अथवा सुख सबै हाम्रा व्याख्याहरु हुन् । व्याख्या बदलिदियो भने अर्कै हुन्छ । व्याख्या आफ्नो हो , हरेक व्यक्ति त्यसलाइ्र्र बदल्नमा स्वतन्त्र छ । कसैको कुनै वन्धन छैन ।
भगवान बुद्धले धम्मपदमा भत्रुभएको छ — “सुसुखं वत । जीवाम वेरिनेसू स्वेदिनो । वेरिनेसू मनुस्सेसू विहराम अबेरिनो ।।” अर्थात बैरीहरुका बीच अबैरी भएर ओहो ! हामी सुखपूर्वक जीवन विताइरहेका छौं । बैरी मानिसहरु बीच अबैरी भएर हामीहरु विहार ग¥छौं । यो कुरा बुद्धले एउटा विशेष अवसरका कारण भत्रुभयो । यसका पछाडि सूत्रको जन्मको कथा छ ।
शाक्य र कोलि राजाहरु बीच रोहिणी नामको नदीको पानीलाई रोकेर दुबैजना जनपदबासी आफ्ना खेतहरुको सिँचाइ गर्थे । एकपटक जेठ महीनामा वालीहरु सुकेको देखेर दुबै जनपदबासी पहिले आफ्नो खेतलाई सिञ्चन गर्न चाहन्थे । अतः दुबैको नोकर बीच झगडा भयो । यो झगडाको खबर दुबैको मालिकलाई भयो । तब दुबैजना सेना लिएर युद्ध गर्न आए । भगवान बुद्ध रोहिणी नदीको तटमा ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो । जब बुद्धले यो थाहा पाउनुभयो उहाँ युद्धमा तत्पर दुबै सेनाको बीच आउनुभयो ।
भगवान बुद्धलाई देखेर शाक्य र कोलिहरुले हथियार फालेर बन्दना गरे । भगवान बुद्धले दुबै राजालाई भत्रुभयो कि के कुराको झगडा हो ? राजाहरुले भने कारण हामीलाई थाहाछैन । भगवानले सोध्नुभयो फेरि कारण कसले जान्दछ ? सायद सेनापतिहरुलाई थाहा होला । सेनापतिहरुले उपसेनापतिहरुलाई इशारा गरे । उपसेनापतिहरुले सैनिकहरु तिर इशारा गरे । हुँदाहुँदा कुरा आखिर नोकरहरुकहाँ सम्मै पुग्यो । नोकरहरुले भने भगवान ! पानीको कारण । बुद्धले भत्रुभयो पानी त सदियौंदेखि बगिरहेको छ । पानीको कारण हुनै सक्दैन । नोकरहरुले भने पहिले कस्ले उपयोग गर्ने भत्रे कुरामा । बुद्धले भत्रुभयो पहिलो कि कारण पानीको कारण होइन । बुद्ध हाँस्नु भयो शाक्य र कोलिहरुको प्रधानहरुसँग सोध्नुभयो पानीको के मूल्य र मानिसको के मूल्य हो ? उनीहरुले भने पानीको त नाममात्र मूल्य छ र मानिस अमूल्य छ । बुद्धले भत्रुभयो फेरि सोच नाममात्रको मूल्यका लागि अमूल्यलाई मेटाउन हिँड्यौ । असारका लागि सारलाई गुमाउँछौ ?
दृष्टि बदलियो भने त सबै बदलिन्छ ।
व्याख्या बदलियो भने त सबै बदलिन्छ ।
साधारणतया धारणा यो हुन्छ कि अरुले दुःख दिइरहेको छ । यसको यो अर्थ हुन्छ कि अरुलेनै सुख दिन्छ । बुद्धको जीवनको एउटा घटना छ । बुद्धलाई कसैले गाली गर्यो । बुद्धले भत्रुभयो तिम्रो कुरा पूरा भैसक्यो भने म जान्छु है त ? त्यो व्यक्तिले भन्यो कुरा होइन म त गाली गरिरहेछु । बुद्धले भत्रुभयो मेरो लागि त यो कुरोनै हो । तिम्रो लागि गाली होला । यदि तिमी दशवर्ष पहिले आएको भए यो मेरो लागि गाली हुन्थ्यो । अब म अर्काका भूलका लागि आपूmलाई दण्ड दिन चाहत्र , दुख पाउन चाहत्र । गाली गरिरहेछौ त तिमीनै जान , म बीचमा आउँदिन । त्यो व्यक्ति फक्र्यो तर रातभरी सुत्न सकेन । ऊ बिहानै माफी माग्न आयो । बुद्धले भत्रुभयो जुन मैले लिएकै छैन त्यसका लागि मैले कसरी क्षमा गर्ने ? तिमी जान , तिम्रो काम जान । दुःखी हुन चाहन्छौ भने त यो घटना पर्याप्त छ तर यदि यसमा पनि खुशि हुन चाह्यौं भने , दुःखी नहुन चाह्यौं भने त कोही अरुले बाधा गर्न सक्दैन । सीधा अर्थ छ कि अरुले न त दुःख दिन सक्दछ न नै सुख । हामी आपैm आफ्नो मालिक बन्यौं भने त कुनै अरुले दुःख दिनै सक्दैन । यसरी अरुको हातमा साँचो दियौं भने , आफ्नो स्वीच अरुलाई दबाउन दियौं भने तबनै अरुले दुःख दिन सक्दछ ।
अर्कै गाउँको एकजना पहलमान गाउँमा आयो । पहलमानी युद्ध भयो । त्यो पहलमान हार्यो । सबैजना ऊदेखि हाँस्न थाले , सबैजनाले जोड–जोडले हाँसेर ताली बजाउन थाले तर त्यो पहलमान पनि जोड–जोडसँग हाँस्न थाल्यो । दर्शकहरु हाँस्न छोडिसके तर त्यो पहलमान हाँसिनै रहेको थियो । त्यो पहलमानले भन्यो म पनि हेरिरहेको थिएँ , ठूलो पहलमान बनेर घुमिरहेको थिएँ , खूब भयो चारैतिर चित । ऊ त पहलमाननै थियो तर त्योभन्दा ठूलो उसको फकीरीपन थियो । मस्ती थियो । ऊ अरुका कारण सुखी–दुःखी बनेनन् , नोकर बनेनन् ।
सुखको आशाबाट दुःख
दुःख तब आउँछ जब सुखको आशा गरिन्छ । सुखको आशा पनि आफ्नो नजिकैबाट हुन्छ । पतिबाट हुन्छ , पत्नीबाट हुन्छ , छोराबाट हुन्छ । यदि कुनै स्त्रीले नहेरी जान्छ भने त दुःख हुँदैन तर पत्नीले नहेरी जान्छ भने दुःख हुन्छ । यदि कसैको छोराले आपूmलाई सम्मान दिँदैन भने दुःख हुँदैन तर आफ्नो छोराले सम्मान गर्दैन भने दुःख हुन्छ । पत्नीले दुःख दिन्छिन् । पतिले दुःख दिन्छ । मित्रले दुःख दिन्छ अर्थात जो निकट छ उसैले दुःख दिन्छ किनकी जो नजिक हुन्छ उसैबाट सुख प्राप्ति हुन्छ । प्राप्ति त हुँदैन आभास हुन्छ । जसबाट सुखको आशा गरिन्छ उसैबाट दुःख प्राप्ति हुन्छ ।
दुःख अपेक्षाबाट प्राप्त हुन्छ । जति ठूलो सुखको उपेक्षा हुन्छ , त्यतिनै टुट्दछ । अपरिचितबाट उपेक्षा हुँदैन त्यसकारण दुःख पनि हुँदैन , दुःख त परिचितहरुबाटै प्राप्त हुन्छ । यदि उपेक्षा छोड्यौं भने , सुखको आशा गरेनौं भने दुःख हुनै सक्दैन । न बाहिरबाट सुख आउँछ , न त बाहिरबाटनै दुःख आउँछ । दुःख सुखको उपेक्षाको नै परिणाम हो । लाओत्सेले भत्रुभएको छ “मैले कहिल्यै सम्मान चाहिन त मेरो कसरी अपमान हुन सक्दछ ।”
दुःखबाट छुटकारा पाउनका लागि बुद्धले उपेक्षा एउटा कारगर उपाय भनेका छन् । उपेक्षाको अर्थ हो , न दुःख प्राप्त हुन्छ न सुख प्राप्त हुन्छ । कुनै उपेक्षा नराख्नुको अर्थ उपेक्षा हो । उपेक्षामा जिउनेहरुलाई न कुनै चीज दुःख दिन सक्छ न सुख । यो त साक्षीभावले जिउँछ ऊ त दुईटैलाई समदृष्टिले देख्दछ ।
दुःख दिएनौं भने स्वतः सुख
दुःख मानिसको मूल स्वभाव होइन अतः त्यस्तो घट्यो भने कठिनाइ हुन्छ , राम्रो लाग्दैन । यो कुनै एक व्यक्तिसँग हुँदैन सबै ब्यक्तिसँग हुन्छ । त्यसैकारण सबै धर्ममा भनिएको छ कि यस्तो कुनै व्यबहार अरुलाई नगर जो स्वयम् अरुद्वारा आपूmले अपेक्षा नगरेको होस् । सीधा अर्थ यो हो कि यस्तो कुनै कार्य नगर जसबाट अरुलाई दुःख होस् । विश्वका सबै प्राणी सुखसँग रहन चाहन्छन् तर साधारण मानिस आफ्नो लागि अलग्गै नियम बनाउँदछ र अरुका लागि अलग्गै । ऊ चाहन्छ कि सारा संसारलाई दुःख भएपनि म सुख चाहन्छु । अरुलाई दुःख दिन्छ आफ्नो सुखका लागि । प्रकृतिको नियम छ जे दिइन्छ त्यही फर्किन्छ । अस्तित्वमा कुनै सीमा छैन , सबै एक–अर्कासँग आधारित छ , जोडिएको छ तर गहिरो दृष्टि नहुनाका कारण सबै अलग–अलग लाग्दछ । जो कसैलाई दुःख दिन्छ दुःख उसैकहाँ फर्केर आउँदछ । त्यसैले त सबै वेद , कुरान , वाइवल , धम्मपद आदि ग्रन्थहरुमा सबैले एउटै स्वर्ण नियम दिएका छन् ः— जो तिमी आफ्ना लागि चाहन्छौ त्योभन्दा बाहेक अरुका लागि नगर ।
तर मानिसको स्वभाव अलग्गै किसिमको छ । ऊ आफ्नो नजिकको व्यक्ति छोरा–छोरी या अरुप्रति अत्याचार पनि यसका लागि गर्दछ ताकि यसबाट उनीहरुलाई राम्रो होस् । आकाँक्षाहरुले अरुको पनि आफ्नो पनि जीवन सुखी हुँदैन बरु दुःखी बनाइन्छ सुखको छाप लगाएर । हिँसा यति गहन छ कि अरुलाई सुख दिने नाममा पनि सताउन सक्दछ । कसैलाई दुःख दिन सक्दछ । त्यसैले भगवान बुद्धले भत्रुभएको छ ः—“अतानं उपमं कत्वा न हत्रेय न घातये” अर्थात आफ्नो समाननै सबैलाई ठानेर नपिट अथवा न नै पिट्ने प्रेरणा देऊ । उहाँले भत्रुभएको छ यदि अरुलाई दुःख दिइएन भने आफ्नो जीवनमा पूmल फुल्न शुरु हुन थाल्दछ किनकी जीवन यस्तो हो कि अरुलाई दुःख दिइँदैन भने आपैmनै सुख भएर आउँछ ।
दुःख भोगाइले सुखको आभास
भगवान बुद्धले भत्रुभएको छ जसले वाल्यावस्थामा व्रम्हचर्यको पालन गर्दैैन र युवावस्थामा धन कमाउँदैन उसले बृद्धावस्थामा चिन्ता मात्रै प्राप्त गर्दछ । एकदम अनौठो कुरो छ कि बुद्धले भत्रुहुन्छ धन कमाऊ अर्थात महत्वाकाँक्षी बन । पद होस् , धन एकत्रीत गर ।
एक यहुदी रबाईसँग एक गरीब व्यक्तिले आएर भन्यो कि म एकदम दुःखी छु , मलाई मर्ने आशिर्वाद दिनुस् । उसले भन्यो कि मेरो जीवन नर्क भइसक्यो । म नर्कमा जिइरहेको छु । एउटा सानो छाप्रोमा बसेको छु । वर्षामा छाप्रोमा पानी तपतप चुहिरहन्छ । त्यसैले म मेरी पत्नी , दुईटा बच्चा , मेरो सासु–ससुरा पनि बस्नुहुन्छ । त्यहीँ मेरो बुबाआमा पनि बस्नुहुन्छ । हिँड्ने पनि ठाउँ हुँदैन । त्यसमाथि चिडचिड र क्रोधको कुरो हुन्छ सधैं । नयाँ ठाउँ बनाउने पनि सामथ्र्य छैन । नरक छ नरक ! त्यसैले मर्ने आज्ञा दिनुस् । बूढो रबाईले भन्यो तिमीलाई रोक्दिन , केवल सातदिन मात्रै पर्ख । ऊसँग सोध्यो तिमीसँग कतिवटा बस्तुभाउ छ ? उसले भन्यो ६ वटा बोका , एउटा गाई , एउटा बाच्छो र एउटा कुकुर पनि छ । रबाईले भन्यो यसो गर कि यीसबै जनावरहरुलाई छाप्रोमा तिमीहरुसँगै राख । त्यो व्यक्तिले भन्यो कि हामी त त्यसै मरिरहेका छौं यिनीहरुलाई राख्यौं भने त उभिने पनि ठाउँ हुँदैन । रबाईले भन्यो केवल सात दिनको त कुरा हो नि । अनि तिमी मर । यत्ति त मान । सारा जिन्दगीमा तिमीले मेरो कुरा मान्यौ अब मर्नेबेलामा यसलाई पनि नटाल । त्यो व्यक्तिले भन्यो कि यसरी त सातदिन पनि बाँचित्र । त्यो बूढोले भन्यो कि मर्ननै चाहन्छौ भने मरिनेछ भनेर किन चिन्ता गर्ने ?
घर पुगेर उसले सबै कुरा भन्यो । सबैले बिरोध गरे । उनीहरु पनि रबाईकहाँ गए । रबाईले भन्यो कि हो मैलेनै भनेको हो , उसलाई यो गर्न देऊ । त्यसताका जब रबाई भन्दछ त गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै जन्तुहरुलाई भित्रै राखियो । सातदिन महिनौंको वर्षौको नरक बन्यो । सातदिन पछि त्यो व्यक्ति रबाईकहाँ आयो । रबाइले भन्यो अब मर्नुभन्दा पहिले ती जन्तुहरु सबैलाई छाप्रोबाट निकाल । रबाईले दुई–तीनदिन प्रतिक्षा गर्यो । त्यो व्यक्ति फर्केर नआएकोले रबाईनै उसकहाँ गयो । के हो ? के छ तिम्रो बिचार ? मर्ने होइन त ? उसले भन्यो छाप्रो त्यही हो । अब यत्ति धेरै ठाउँ देखिन्छ , यस्तो आनन्द कहिल्यै देखेकोे थिइन । सबैमा प्रेमभाव बढिरहेको छ । अब को मर्छ र ! सबै तिम्रै कृपा रहेछ ।
दुःख सघन भयो , फेरि अनुभव भयो सुखको , जस्तो स्थितिमा छ त्यस्तै स्थितिमा । यहाँ दुःखले पनि दीशा दियो , सुखको अनुभव गरायो । जीवनमा दुःख पनि जरुरी छ , सुखको आभासको लागि ।
दुःखको निवारण छ
भगवान बुद्ध जेतवनमा बस्नुभएको थियो । उहाँसँग पाँचशय भिक्षुहरु पनि बसिरहेका थिए । उनीहरु आंशसालामा बसेर रात्रिमा कुरा गरिरहेका थिए । उनीहरुको कुरा साधारण व्यक्तिको जस्तो थियो । बुद्धले मौन भएर त्यो सबै सुनिरहेका थिए । उनीहरु कुराकानीमा यत्ति तल्लिन थिए कि बुद्धलाईनै भुले । कोही भनिरहेका थिए फलानो गाउँको बाटो कति राम्रो , फलानो बाटो कति नराम्रो । फलानो बाटोमा छायाँदार बृक्ष छ , स्वच्छ सरोवर पनि छ । फलानो बाटो कस्तो बिग्रेको छ त्यसलाई भगवान्ले नै बचाओस् । कोही भनिरहेका थिए फलानो राजा पनि अद्भूत र त्यहाँको सेठ पनि अद्भूत र दानी । फलानो राजा कत्ति कञ्जूस त्यहाँको सेठ पनि कत्ति कञ्जूस त्यहाँ त भुलेर पनि कोही नजाओस् । यस्ता प्रकारका थुप्रै कुराहरु भइरहेका थिए । बुद्धले यो सबै सुत्रुभयो । चौंकिनुभयो , हाँस्नुभयो । भिक्षुहरुलाई नजिक बोलाउनुभयो । उहाँले भत्रुभयो भिक्षु भएर पनि बाहिरि मार्गको कुरा गरिरहेछौ । समय कम छ तर गर्ने काम धेरै छन् । बाह्यमार्गमा जन्मौं–जन्मौं भट्किरहेछौ , अझै थाकेनौ ?अन्तर्मार्गबाट सोच । सौन्दर्य त अन्तर्मार्गमा छ । शरण पनि खोज्ने भए त्यहाँ खोज किनकी दुःख निवारणको त्यही मार्ग हो । उहाँले भत्रुभयो भिक्षुहरु — “ मग्गानुट्ठगिको सेट्टो ” अर्थात यदि श्रेष्ठमार्गको कुरा गर्ने हो भने आर्य अष्टाङ्गिकमार्गको कुरा गर । यो तिमीहरु कुन मार्गको कुरा गरिरहेछौ ? तब उहाँले “गाथा” भत्रुभयो । अनि “उर” भत्रुभयो अर्थात भित्र आउने थुप्रै मार्ग मध्ये आठअङ्गको मार्ग श्रेष्ठ छ ।
भगवान बुद्धले दुःख निरोधका आठ सूत्रहरु दिनुभयो ।
पहिलो सूत्र ( सम्यक दृष्टि ) ः– अर्थात जस्तो छ त्यस्तै हेर्नु , आफ्ना धारणहरुद्वारा हेर्ने होइन । आँखा निर्दोष होस् जस्तो ऐना खालि होस् । यदि ऐनामा धुलो लागेको छ भने , अथवा कुनै रङ्ग लागेको छ भने अथवा केही पोतिएको छ भने त जुन कुरा सत्य हो त्यो ऐनामा देखिँदैन । सम्यक दृष्टिको अर्थ हो सबै दृष्टिहरुबाट निष्पक्ष ।
दोस्रो सूत्र ( सम्यक सङ्कल्प ) ः–यसको अर्थ हो जुन गर्न योग्य छ त्यही गर र त्यसैमा पूरै जीवन लगाइदेऊ । कुनै अहंकारका कारण नगर । त्यही सम्यक सङ्कल्प हो । त्यस्तो सङ्कल्प जुन बोधद्वारा होस् । जीवनको प्रौढताद्वारा होस् । क्षणिक उत्साह , मानिसहरुले के भन्लान् यस भावनाद्वारा नहोस् । जसमा बाहिरी उत्साह नहोस् , आन्तरिक उत्साह होस् ।
तेस्रो सूत्र ( सम्यक वाणी ) ः–जस्तो छ त्यस्तै गर । आफ्नै मिलाएर , बदलेर होइन । यस्तो होइन कि भित्र केही छ बाहिर केही । वाणीमा हृदयको सही अवस्था प्रकट होस् । जुन बोल्नु छ त्यही–त्यही बोल । धेरै नबोल जुन विना पनि चल्दछ , जति आवश्यक छ त्यति बोल । धेरै बोल्नाले धेरै समस्या उब्जाउँछ , जीवन व्यर्थको जालमा फस्न पुग्दछ ।
चौंथो सूत्र ( सम्यक कर्मात ) ः–अर्थात त्यही गर जो हृदयले गर्नलाई भन्छ । यस्तो गर्ने होइन कि कसैले गर भन्छ । त्यही गर जुन गर्न योग्य लागोस् । व्यर्थ काम होइन , त्यही काम गर जसले जीवनमा सार मिलोस् । व्यस्त रहनु , केही न केही गरिरहनु जरुरी छैन । त्यही गर जुन जरुरी छ । त्यसैलाई बुद्ध सम्यक कर्म भत्रुहुन्छ ।
पाँचौं सूत्र ( सम्यक आजीव ) ः– आजीवको अर्थ आजीविकासँग छ । रोटी त कमाउने हो तर आजीविका सम्यक हुनुपर्दछ । विध्वंसात्मक नभएर सृजनात्मक हुनुपर्दछ र जीवनलाई परमात्मातर्फ लिएर जाने हुनुपर्दछ । बुद्ध भत्रुहुन्छ आपूmलाई जिउनुका लागि अरु कसैको जीवन नष्ट गर्नु अनुचित हो । आजीविका यस्तो हुनुपर्दछ जसबाट कसैको अहित नहोस् । यदि कोही अरुलाई अहित गर्दछ भने त उसले आफ्नै अहितको बीउ रोप्दछ ।
छैठौं सूत्र ( सम्यक व्यायाम ) ः– यहाँ व्यायामको अर्थ श्रमबाट सम्यक श्रम न त आलस्य न त अति कर्मठता हो , जहाँ कहिल्यै दौड रोकित्र । दुइटैको बीचको मार्ग हो सम्यक मार्ग । सम्यक व्यायाम जहाँ जीवनको उर्जा सन्तुलित होस् ।
सातौं सूत्र ( सम्यक स्मृति ) र आठौं सूत्र ( सम्यक समाधि ) ः–सम्यक स्मृति त्यो हो जसद्वारा ज्ञानलाई हेर्ने मानसिक योग्यता प्राप्त गर्ने कोशिश गर्नु । अर्थात मन बन्द होस् र होश बाँकी रहोस् । “जागृत भएर आनन्दित हुनु ” त्यसैलाई बुद्धले सम्यक समाधि भत्रुभएको छ । अन्तिम दुई चरण सबभन्दा महत्वपूर्ण छन् । सातौं सूत्र सम्यक स्मृति परिधिमा र आठौं सूत्र सम्यक समाधि केन्द्रमा । परिधिमा होश होस् र अनि केन्द्रमा पनि होशको ज्योति बल्यो भने त्यो नै सम्यक समाधि ।
दुःख निरोधको अवस्था
जब यो निश्चय भयो कि जीवन छ भने त दुःख अवश्यम्भावी छ । फेरि कारणमा विचार ग¥यौं र कारण हटाउनका लागि अष्टाङ्गिक मार्गको अनुसरण गरेर सातौ–आठौं सूत्रसम्म पुग्यौं भने त निदान भयो , उपाय भयो , मेटियो तब चौंथो आर्यसत्य सुखको अवस्था आयो । यसलाई निर्वाणको अवस्था महासुखको अवस्था जे पनि भत्र सकिन्छ । यो अवस्थामा आइसकेपछि मानिसको सबै तृष्णा समाप्त हुन्छ त फेरि उसले फर्केर जन्म लिएर यस संसारमा आउने कुनै कारण बाँकी रहँदैन । जसै–जसै दुःख समाप्त हुँदै जान्छ संसारको यात्राको समाप्तितिर दोरिँदै जान्छ । फेरि व्यक्तिको जीवनको आखिरि यात्रा हुन्छ । एकपटक दुःख निरोधको अवस्था या महासुख उपलब्ध भएपछि शरीर छोडिसकेपछि ऊ कहिल्यै फर्केर जीवनमा आउँदैन । ज्योतिमा ज्योति मिलिदिन्छ । अर्को शब्दमा त्यही त निर्वाण हो । फेरि त्यहीनै त मोक्ष हो । जब ज्योतिमा ज्योति बिलुप्त हुन्छ त शूक्ष्म शरीरमा समाहित इच्छाहरु , तृष्णाहरु , अहङ्कारहरु , अस्मिता आदि जुन पुनर्जन्म लिने कारण बन्दछ ती नै रहँदैनन् भने त्यो आत्मा भौतिक शरीर समाप्त भइसकेपछि आवागमनबाट मुक्त भइजान्छ । आध्यात्ममा यो महासुखभन्दा बढी जीवनको अन्य कुनै उपलब्धि छ भनेर मानिएको छैन । यी चार आर्यसत्यको माध्यमबाट बुद्धले व्यक्तिलाई चरमसीमासम्म पुग्ने दीव्य दृष्टिको मार्ग देखाइदिनुभएको छ ।
भगवान बुद्धले आफ्नो उपदेश मात्र कसैलाई पनि बाध्य पार्नुभएको छैन । स्वयम् अनुभव गरेर जात्रका लागि भत्रुभएको छ । जीवनको सत्य भत्रुभयो , रोगको उपचार दिनुभयो जसलाई लिएर लाटोले बोल्न सकेजस्तै अनेकौं व्यक्तिहरु दुःखबाट मुक्त भए । महासुखको अवस्था प्राप्त गरे । उहाँले बताउनुभएको मार्गलाई बुझौं , हृदयङ्गम गरौं । यो मार्गमा गयौं भने बुद्धले जस्तै जो कोहीले पनि त्यो स्थिति प्राप्त गर्न सक्दछ । बुद्धलाई महामानव , भगवान , अलौकिक शक्तिले युक्त भनेर आपूmलाई असमर्थ मान्यौं भने त आपूmलाई धोका दिएर हामी मानिसको गरिमालाईनै कम गरिरहेका हुन्छौं जसलाई बुद्धले जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि “अप्प दीपो भव” को उपदेश दिनुभएर शिखरमा पुर्याउनुभएको छ । यो जन्म त अनन्त जन्महरु मध्ये अगाडिको अध्याय हो । यात्रा यदि चालू रहोस् , कदम बढिरहोस् दिशा यदि सही सङ्कल्प र होश बढाउनुतिर छ । हरेक मानिसले आफ्नो भित्र लुकेको दीब्यतालाई चित्रे र सही दिशामा जानुमा छ । भगवान बुद्धले त मानवमात्रको कल्याणका लागि जीवनको सत्य उद्घाटित गर्नुभएको हो ।
बिजु सुवेदी “विजय”
सन्दर्भ पुस्तकहरु :-
१) यस धम्मो सनतनो— ओशो ( हिन्दी )
२) महान सल्लेख सूत्रोपदेश — अग्गमहापण्डित महोपकारक महास्थविर महाशी सयादा ( नेवारी )
३) Buddhism of Wisdom & Faith— "Tam" Dharma Master of Taiwan Thich-Thien ( अङ्ग्रेजी )
४) आधुनिक विज्ञानको दृष्टिमा बुद्धधर्म — ज्ञानज्योति कंशाकार र लक्ष्मीप्रभा कंशाकार ( नेपाली )
५)उत्तर प्रदेशमे बौद्धधर्मके विकास — दत्त नलिनाक्षी ( हिन्दी )
६) सम्यक संस्कार — भिक्षु सम्यक सम्बोधि प्रौणपुत्र ( नेवारी )
७) बुद्ध र उहाँको शिक्षा — महेन्द्र कुमार शाक्य ( नेपाली )
८) गौतम बुद्ध — वसन्त महर्जन ( नेपाली )
९) बुद्धको आत्मकथा – बसन्त महर्जन ( नेपाली )
१०) शाक्य— प्रणयपासा ( नेपाली )
११) बुद्ध र बुद्धवाद — अग्गमहापण्डित महोपकारक महास्थविर महाशी सयादा ( नेपाली )
१२) बुद्ध सम्बन्धि बिभित्र पत्र–पत्रिकाहरुमा प्रकाशित नेपाली , नेवारी , एवम् हिन्दी लेखहरु
नोट :- यो लेख बुद्धजयन्तीको विशेष लेख अन्तर्गत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारप्रति समर्पित समाचार र बिचार प्रधान साँस्कृतिक पत्रिका "साप्ताहिक अमलेख" मा २०६९ बैशाख १८ गते सोमबार प्रकाशित भइसकेको छ ।
तिमीसँग बिताएका दुई पलले नै आजकल जीवन धानिरहेछ
दुनियाँको नजरमा सरम् भयो भन्या'
कुमार कान्छामा समर्पित गजल
तीन हाइकु (जापानी क्रिसमस)
मझेरी भलाकुसारी, अंक १८ (होम सुवेदी)
कविताको शक्ति र नेपाली कविता
हाँस्ने पनि तिमी सँगै रुने पनि तिमीसँगै
तिम्रा सारा कुरा सुनी तिम्रो हातमा समाएथें
नव गीतकार तथा प्रस्तुतकर्ता मणिराज बस्नेतको "फाटेको मन"लाई चिरफार गर्दा
तिम्रो घरको आँगनीमा ती जन्तीका लस्कर देखे
कटुञ्जेदेखि क्यालिफोर्नियासम्मको वर्णन
प्रदेश र राज्य हुँदा
बेतलबी काम हाम्रो ढुङ्गा हान्ने मात्र भयो
तपाइँको पहाड कहाँ हो ?